यसरी टुटेको थियो जहाजको सम्पर्क, विमान दुर्घटनास्थल कस्तो थियो ? | अग्निबाँण, समाचार र बिचारको अग्नि
← अग्नी एअरको विमान दुर्घटना/चालक दलसिहत सबै १४ जनाको मृत्यु,
जहाज दुर्घटनाको उद्धारमा लापरबाही →
यसरी टुटेको थियो जहाजको सम्पर्क, विमान दुर्घटनास्थल कस्तो थियो ?
काठमाडौ, भाद्र ८ – नौ दिनपछि लुक्ला विमानस्थलमा पहिलो पटक मंगलबार बिहान मौसम खुलेको जानकारी आएपछि अग्नी एयरको विमानलाई उड्न दिइएको थियो । तर, दुर्भाग्य १५ मिनेटमा नै फेरी लुक्ला विमानस्थलले मौसम बिग्रिएको जानकारी गरायो ।
लुक्लामा अवतरण गर्न नसक्ने अवस्था भएपछि चालकले काठमाडौं सम्पर्क गरेको विमानस्थलका हवाई ट्राफिक सेवाका विमलेश कर्ण बताए । ‘काठमाडौंमा पनि मौसम बिग्रिएपछि सिधा रुटको सट्टा सिमरा हुँदै आउन निर्देशन दियौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि सम्पर्क हुन सकेन । दुर्घटनाको जानकारी पनि हेटौडाका स्थानियबासीले फोनबाट दिए ।’जहाजलाई रुट परिवर्तन गरी काठमाडौं आउन पूर्वतर्फ १६ माइल अगाडी घुमेर ११ हजार ५ सय फिटको उचाई लिनुपर्ने हुन्छ । आइएफआर सिस्टममा रहेका उडान’bout जानकारी लिइरहेको हुँदा सम्पर्कमा रहन जहाजले यो उचाई लिनु पर्ने कर्णले बताए ।
तर, करिब ८ माइल पुगेपछि चालकले मौसम सफा देखिएको भन्दै सिधा रुटबाटै काठमाडौं फर्कने बताएका थिए । ‘त्यसपछि सम्पर्क टुट्यो’ कर्णले भने, ‘त्यसपछि जहाज कहाँ/कस्तो अवस्थामा छ भनेर हेर्न सकिएन ।’ जहाज राडरको परिधिभन्दा बाहिर गएकाले दुर्घटना रोक्न नसकिएको उनले बताए ।
मंगलबार बिहान शिखरपुर, मकवानपुरमा अग्नि एयरको विमान दुर्घटनाग्रस्त हुँदा भिषण वर्षा भइरहेको थियो। खराब मौसमका कारण लुक्लामा अवतरण गर्न नसकेपछि राजधानी फर्किएको विमान काठमाडौं आइपुग्नै लाग्दा पहाडमा ठोकिएर शिखरपुर गाविसको बस्तिपुरमा खसेको थियो। कस्तो थियो विमान दुर्घटना भएको ठाउँ ? उद्दारकामा खटिएको नेपाली सेनाको सौजन्यमा प्राप्त फोटो फिचर।
शवलाई हेलिकोप्टरमा राखिँदै